Amaqembu ‘amancane’ asimoshela isikhathi – Malema – LIVE Express
u-Commander in Chief we-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, ugxeke amanye amaqembu aphikisayo ngokuthi abamoshela isikhathi njengoba bona sebejahe ukukhipha iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC) emandleni.
Ukusho lokhu njengoba i-EFF kade yethula usomqulu wayo wezethembiso zokhetho, e-Orlando Stadium, e-Gauteng.
“Ningizimu Afrika, kumele engabe sinamaqembu amabili angenela ukhetho eNingizimu Afrika, i-ANC ne-EFF… basimoshela (amanye amaqembu aphikisayo) isikhathi. Mabili amaqembu la eNingizimu Afrika, i-ANC kanye ne-EFF. Ngakho thina asiqhudelani namuntu, siqhudelana ne-ANC. Yingakho nje sithe uma sigcwalisa inkundla, asiyigcwalisi inkundla siqhudelana nanoma ubani, sikwenza lokho siqhudelana ne-ANC,” kusho uMalema.
“i-ANC yahluleka ukugcwalisa inkundla e-Nelson Mandela Municipality. Ngakho sibashayile. Isitebhu sokuqala, siyihlulile i-ANC uma kuziwa ekugcwaliseni inkundla. Noma ngabe ikuphi lapho bekhona babuka i-tv ngehlo elilodwa.”
“Thina, siqhudelana ne-ANC, hhayi nanoma ngabe yiliphi iqembu lezepolitiki elingopopayi. Yi-EFF kanye ne-ANC. Sithi kubona wozani, asinisabi, sinilindele, sesikulungele ukuthatha izintambo komasipala. Singuhulumeni olindile,” kusho uMalema okhulume waze wacishe washelwa yizwi isikhathi esicishe sibe ngangehora nohhafu engaphumuli.
i-EFF iyiqembu lesithathu ngobukhulu eNingizimu Afrika, kanti ilandela i-Democratic Alliance (DA), yona eyiqembu lesibili ngobukhulu kuleli.
uMalema uphinde wakhipha isexwayiso esiqinile esibhekise kwinhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC) ngokuthi iyeke lokho akubize ngomkhuba wayo wokuphikisana ne-EFF ngokuthi intshontshe amavoti ukuze kuwine i-ANC.
Lo mholi sekukaningi esola ngokuthi i-EFF yayihlula i-ANC esifundazweni i-Gauteng okhethweni lukazwelonke ngo-2014 kodwa i-IEC ‘yawantshontsha’ amavoti. Uchaze i-IEC njengeqembu lesithathu eliphikisana ne-EFF.
“uZuma uzophuma ehhovisi ethanda, engathandi. Uyobe engeseyena uMengameli ngo-2019,” kusho uMalema, enanelwa yinhlokomo kubalandeli beqembu abebegcwele inkundla.
uMalema uthi labo abamsabisa ngokumbopha ngamacala okuvukela umbuso abamthusi nakancane wathi bangeza noma inini bezombopha.
“Iyodwa into engiyimele, yiqiniso. Angihambe ngishaya abantu, futhi angikaze ngisabise ukushaya uZuma ephalamende. Ngikhuluma iqiniso kuphela, ukuphela kwento esiyenzayo. Kungani uvula icala lokuvukela umbuso umuntu okhuluma iqiniso? Yikuphi lokho kuvukela umbuso? Kusukela nini iqiniso liwukuvukela umbuso?
Bahlongoza ukunyusa imali yokugibela abamatekisi
IWits ihlwithe i-#TKO2017 ngomzuzu wokugcina
Lisavalelwe isoka ‘elibulale’ intombi nomama wentombi